Daytrips Archives | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Qof kasta oo halkan ka baxsan Yurub? gacantaada sara kicin haddii aad sida xifadiisa, gaadiidka dadweynaha sida aan ahay. Hubaal, New York waxay leedahay marin-hoosaad, iyo Toronto ayaa maamusha metrooga, laakiin guud ahaanba, dunidu ku koray baabuurta. Markaa markasta oo aan helno annaga oo samaynayna…
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, ...
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Sidaas daraaddeed aad ugu dambeyntii u sameeyeen. Waxaad ku riday, waayo, aad fasaxa shaqada, tigidhada ka iibsadeen diyaarad iyo madax si Hungary fasax ay u qalmeen. Oo intuu in ay si fiican oo wanaagsan oo dhan – ka dib oo dhan, Budapest waa magaalo qurux badan – ha iibin naftaada…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Safarada Maalinta Qiimeynta-Sare Si Looga Qaado Berlin waa waajib inkasta oo Berlin lafteedu ay tahay meel aad ufiican oo la booqdo! Waxaa jira jiidashada weyn oo ku filan in caasimada Germany in ay sii aad degan maalmo. Si kastaba ha ahaatee, day trips from Berlin to the neighboring towns and countryside can…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Sida qurux badan a, buux magaalada badan in ay bixiyaan, Vienna waa meel caan ah oo safarka. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waa magaalo ku hareereysan meelo kale oo badan oo xiiso leh. Haddii aad haysato waqti safarka maalinta ka Vienna a, halkaas oo waa inaad jeedi dareenka? Anaga…
5 Saffarada Day From Rome Si Baadh Italy
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Rome waa magaalo qurux badan, laakiin mararka qaarkood nin socoto ah damacdaa yara kala duwan. Kuwa joogaan dheer Rome ku filan si ay u sahamiyaan waxaa laga yaabaa jeclaan lahaa in eegno agagaarka degaanka, sidoo kale. Nasiib wanaag, waana waxa safar maalin waxaa loogu talagalay! Markuu tixgeliyey sida wanaagsan…